Cagaaran oo cisbitaal yeelatay (sawirro) – Radio Daljir
Cagaaran oo cisbitaal yeelatay (sawirro)
Janaayo 15, 2018 2:54 b 0
Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiwe Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 14 jan-2018 ayaa waxaauu xadhiga kajaray cusbatlaaka magaalada Cagaaran ee gobolka Mudug.
Madaxwaynaha dawladda Puntland ayaa waxaa ku wehelinayay munaasabada xadhig jarka cusbataalka masuuliyiin katirsan labada gole ee dawladd Puntland, maamulka gobolka Mudug, kan degmada gaalkacayo, qaar katirsan saraaakiisha Madaxtooyada dawladda Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxwaynaha dawladda Puntland oo oo kahadlay munaasabada xadhig jarka ayaa u mahad celiyay bulshada magaalada Cagaaran waxaana uu Madaxwaynuhu sheegay in cusbatalkani wax badan ka bedeli doono baahida caafimaadka ee kajirta deegaanka, isla marahaantaana waxaa uu madaxwaynuhu xusay in uu kamid yahay mashaariicda isku tashiga bulshada Puntland.
munaasabada ayaa waxaa ka soo qeyb galay masuuliyiin ka tirsan Dowlada Puntland duqa maamulka gobolka, kan degmada Gaalkacyo, Dr Abdulkadir (dhagacade) barayaasha jaamacadaha Gaalkacyo ardayda wax ka barta jaamacadaha , dhammaan masuuliyiintii ka hadashay munaasabada ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in uu Madaxweynaha dowladda puntland kulan kala soo qayb galo.
Ugu danbayn Madaxweynaha dawlada Puntland ayaa ardayda kulanka ka soo qayb gashay kula dardaarmay in ay waxbarashadooda sii wataan.